မြန်မာ, 20 နိုဝင်ဘာ 2017
20 နိုဝင်ဘာ 2017 တနင်္လာ
ရခိုင်အရေးကိစ္စနဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအားတွေ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပဲ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ၀န်ကြီးဌာန အသစ်နှစ်ခုကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး၊ ၀ါရင့်သံတမန်တွေကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ကိုလည်း အသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
ကန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စစ်တွေ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည်စခန်းလေ့လာ
မြန်မာပြည်ကို ၂ရက်ကြာရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Jeffrey Alan Merkley ဦးဆောင်တဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့က အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်အရေး တရုတ်အဆိုပြုချက်အပေါ် တုံ့ပြန်ချက်များ
ရခိုင်ပြဿနာ ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် နယ်မြေတွင်း အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကနေ စတင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်သုံးဆင့်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်က အဆိုပြုထားပါတယ်။
ASEM အစည်းအဝေး ရခိုင်အရေးထည့်သွင်းဆွေးနွေး
၁၃ ကြိမ်မြောက် ASEM အာရှ ဥရောပနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့စတင် ကျင်းပပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝန်း ပဋိပက္ခတွေ မတည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေချိန်မှာ နိုင်ငံတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့ နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ စတင်ကျင်းပတဲ့ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ASEM အာရှ ဥရောပနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲ အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်သတင်းယူနေတဲ့ မစုမြတ်မွန် တင်ပြထားပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၁၁. ၂၀. ၂၀၁၇
ရာထူးကနုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေတဲ့ ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတ တရားစွဲခံရနိုင်ခြေရှိ၊ ရခိုင်အရေးကဏ္ဍသုံးခုခွဲဖြေရှင်းဖို့ တရုတ်ရဲ့အဆိုပြုချက်ဟာ အခြေခံပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင် အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြော၊ ASEM အာရှ ဥရောပနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲ နေပြည်တော်မှာစတင်၊
Robert Mugabe ရာထူးကနုတ်ထွက်စကား မပြော
တိုင်းပြည်ကို ရုပ်မြင်သံကြားကတဆင့် ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းအတွင်း သူ့အနေနဲ့ ရာထူးက နုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်တဲ့အတွက် ဇင်ဘာဘွေသမ္မတ Robert Mugabe ဟာ တရားစွဲခံရမယ့် အရေးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေး သဘောတူညီချက် မကြာခင်ရဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမျှော်လင့်
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့ရေးအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာအကြား ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာမှာ နှစ်ဘက် နားလည်မှု ရလုနီးပါး ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Abul Hasan Mahmood Ali ရဲ့ ASEM အာရှ - ဥရောပ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ စည်းဝေးပွဲ ခရီးစဉ်အတွင်း သဘောတူညီချက် ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဒေသခံတွေကိုကူညီဖို့ ဂျာမနီကတိပြု
ဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရောက်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဒေသခံ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကို အကူအညီတွေ ထပ်ပေးဖို့ ကတိပြုကြောင်း ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sigmar Gabriel က သတင်းထောက်တွေကို တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ရင်းပြန်ပို့ရေး ASEM မှာ ဂျပန်ဖိအားပေးမည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ရင်းပြန်ပို့ရေးကိစ္စကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ASEM အာရှ-ဥရောပ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖိအားပေး ပြောဆိုသွားမယ် လို့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Taro Kono က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်အကျပ်အတည်း ကဏ္ဍသုံးခုခွဲဖြေရှင်းဖို့ တရုတ်အဆိုပြု
ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာကို အခန်းကဏ္ဍသုံးခုခွဲခြားပြီး ဖြေရှင်းဖို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Wang Yi က မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ကပူးတွဲလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း အဆိုပြု ပြောဆိုသွားပါတယ်။
EU နိုင်ငံခြားရေးအကြီးအကဲ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်း ရောက်ရှိ
ဥရောပ သမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒရေးရာ အကြီးအကဲ Federica Mogherini နဲ့ တခြား ဥရောပ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေ ဒီကနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။